ဆပ်ပြာ မှအကောင်းဆုံး ဆပ်ပြာ မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျွန်တော်တို့သည်သည်အပါအဝင်သတ္တု Crafts တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲကျယ်ပြန့်, ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ပို့ကုန်ထုတ်လုပ် ဆပ်ပြာ အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစား Taiwan။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်စ gratifyingly ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိယနှင့်နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များနှင့် client များ၏လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖက်ရှင်ခေတ​​်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းအတွက်အပြည့်အဝဖြစ်ကြောင်းပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုရှိသည်။
Falan ပိုး Oatmeal ပြုပြင်ဆပ်ပြာဆပ်ပြာ
Falansi Oatmeal Repair Softening Soap သည်လွယ်ကူပါသည်-ရန်-ခန္ဓာကိုယ်ဆပ်ပြာကိုသုံးပါ
အရေပြား၌ဆုံးရှုံးခဲ့ရရေကိုဖြည့်စွက်,ကော်လာဂျင်၏ function ကို restore,နှင့်အသားအရေနူးညံ့သောစောင့်ရှောက်လော့,တောက်ပနှင့် elastic.
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:80g x ကို 2pcs/သတျတော
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.antiagingproducts.com.tw/my/oatmeal-soap.html
အကောင်းဆုံး ဆပ်ပြာ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် ဆပ်ပြာ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်
VSK တဆေးဆေးရည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပူဖောင်းများသည်ညင်ညင်သာသာနှင့်လွယ်ကူစွာအမှိုက်နှင့်မိတ်ကပ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်,အညစ်အကြေးနှင့်အညစ်အကြေးများကိုသေချာစွာသန့်စင်ပေးသည်,အဝတ်လျှော်ပြီးနောက်အသားအရေချောမွေ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်.Maintenance အာရုံစူးစိုက်မိတ်ကပ်နှင့်မျက်နှာကိုတစ်ချိန်တည်းဖယ်ရှားပါ,တ ဦး တည်းခြေလှမ်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သန့်နိုင်ပါတယ်. Maintenance ရည်ရွယ်ချက်အမှုန်များနှင့်သိပ်သည်းသောပူဖောင်းများသည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအပေါက်အတွင်းသို့ထိုးဖောက်နိုင်သည်,အသားအရေကိုစိုစွတ်အောင်သန့်ရှင်းပေးပါ,ဖုန်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ,နှင့်အသားအရေနူးညံ့သိမ်မွေ့စေပါ,အဝတ်လျှော်ပြီးနောက်ချောမွေ့နှင့်ရေနှင့်ပြည့်ဝ၏.ကို Maintenance အကြံပေးချက်များ လုပ်ပါ-ဖယ်ရှားရေးအထိ-2 မှ3မြေပဲအရွယ်အစားယူပါ(ခေါင်းမှ2မှ3ကြိမ်နှိပ်ပါ),နှင့် site ပြီးနောက်ဝါဂွမ်း pad ပါအပေါ်ညင်သာစွာမိတ်ကပ် remover ပွတ်ပေးပါ,ရေနဲ့ချွတ်ဆေးကြောပါ. သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောပါ-စွန်ပလွံပင်ပေါ်မှာသုံးကြိမ်နှိပ်ပါ,ရေအနည်းငယ်ထည့်ပြီးပွတ်တိုက်ပြီးနောက်အပေါ့အလေးသွားသည်,မျက်နှာပေါ်တွင်ညင်သာစွာလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရေနှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သုတ်ခြင်း. စွမ်းရည်:100ml/ပုလင်းမူလ:ထိုင်ဝမ်
Falan ပိုးအမိုင်နိုအက်ဆစ် elastic whitening သန့်စင် Falan ပိုးအမိုင်နိုအက်ဆစ် elastic whitening မျက်နှာသန့်စင်ရေးလွယ်ကူသည်-ရန်-မျက်နှာသန့်စင်ဆေးသုံးပါမြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်အတူ-အရေပြားစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းအဆုံးသတ်,သင်သည်သင်၏အာရုံကိုမှောက်လှန်နိုင်ပါတယ်.သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောစဉ်အဆင့်မြင့်အရေပြားထိန်းသိမ်းသည့်ထုတ်ကုန်များအတွေ့အကြုံရှိပါစေ.မျက်နှာဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်း၌ပထမဆုံးရွေးချယ်မှု.အသစ်ကောင်တာ-အဆင့်ဖော်မြူလာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်.သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောခြင်းသည်နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသောအသားအရေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်. ,၎င်းသည်အပေါက်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားပေးသည်,ဆီလျှော်မှုကိုထိန်းညှိပေးပြီးအရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်,ဆေးကြောပြီးလျှင်စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီးအာဟာရဖြစ်စေသည်,အမိုင်နိုအက်ဆစ်,ပါဝင်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကို,အသားအရေမြင့်မားခြင်း-ခင်မင်,အထိခိုက်မခံသောအသားအရေသည် carrageenan ထုတ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်ပါ,အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအနှစ်သာရနှင့်အတူအသားအရေ elasticity ထိန်းသိမ်းထားသည်,သင်တို့အဘို့အပျော့နှင့်တောက်ပမျက်နှာကိုဆေးကြောပါ အသုံးပြုသည်:စင်ကြယ်ခြင်း,တောက်ပ,အစိုဓာတ်,မိတ်ကပ် removerသက်ဆိုင်သောအရေပြားအမျိုးအစား:အမျိုးမျိုးသောအသားအရေအမျိုးအစားများထုပ်ပိုးသတ်မှတ်ချက်:120ml/အပိုင်းအစမူလနေရာ:ထိုင်ဝမ်
MONIFACE မျက်နှာသန့်ရှင်းရေး ပျော့ပျောင်းသော်လည်းနက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးနူးညံ့သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းသောစုပ်ယူသန့်ရှင်းရေး,လျော်ကြေးငွေ moisturizing,Whitening နှင့်ပျော့ပျောင်းသောမူပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်သီးသန့်ပုံသေနည်းအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများ:Hyaluronic အက်ဆစ်,ကော်လာဂျင်,သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးမြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်ရေ,ကလိုလင်း,သွားဖုံး ၃ ခု,အမိုင်နိုအက်ဆစ်မြှုပ်အေးဂျင့်ထိရောက်မှု:အသားအရေကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးအရေပြားဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဘေးကင်းရေး:မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုနှင့် steroids အခမဲ့ဖြစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖောင့်အရွယ်အစား:05000256တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံမူပိုင်ခွင့်တီထွင်မှုအမှတ်.I660119 တရုတ်မူပိုင်ခွင့်အမှတ်.M556284စွမ်းရည်:250ml